Shiinaha TUBE-1105-2 warshad iyo saarayaasha |Kingflex
Waxqabadka wax soo saarka ee heer sare ah wuxuu la kulmaa codsiyo kala duwan Iyadoo caag nitrile ah oo ah alaabta ceeriin ee ugu weyn, waxaa lagu xumbo geliyey caag-caag ah oo dabacsan oo kuleylka kuleylka leh oo leh xumbo gebi ahaanba xiran.Waxqabadka wax soo saarka ee ugu fiican wuxuu ka dhigayaa alaabta si ballaaran loogu isticmaalo meelo kala duwan oo dadweyne, warshado warshadeed, qolal nadiif ah iyo machadyo waxbarasho caafimaad.
Iyada oo caag nitrile ah oo ah alaabta ceeriin ee ugu weyn, waxaa lagu xumbo geliya caag-caag-kuleyl ah oo dabacsan oo leh goobooyin gebi ahaanba xiran, taas oo ka dhigaysa badeecada si ballaaran loo isticmaalo meelo kala duwan oo dadweyne, dhirta warshadaha, qolalka nadiifka ah iyo xarumaha waxbarashada caafimaadka.
Alaabta dahaarka Kingflex waxay dhaafeen shahaadooyinka BS476,UL94,CE,AS1530,DIN,REACH iyo RohsTayada waa la dammaanad qaaday.
Kingflex, oo ah warshad wax-soo-saar iyo ganacsi, soo saarta oo dhoofisa alaabada dahaarka xumbo-cagaha in ka badan 40 sano laga soo bilaabo 1979. Waxaan sidoo kale Waqooyiga ka joognaa webiga Yangtze--warshadii ugu horreysay ee alaabta dahaadhka ah.Warshadayadu waxay ku fadhidaa 130000 mitir oo laba jibbaaran.Waxaan leenahay aqoon-is-weydaarsi dhalaalaya iyo bakhaar nadiif ah.
Xiga: Xakamaynta Xumbo-xarafeedka Heerkulka Hooseeya
Xashiishka Xumbo ka samaysan ee kulaylka
Duubka Dahaarka Caag-isku-dhega ah
Saxan caag ah oo caag ah 1